Dadweynaha reer Puntland oo ka hadlay Shirkii Soomaalida ee London – SBC
Dadweynaha reer Puntland oo ka hadlay Shirkii Soomaalida ee London
Dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa Aragtiyo kala duwan ka dhiibtay Shirkii ka dhacay magaalada London Cariga Ingiriiska iyo qodobadii ka soo baxay .
Dadweynaha qaar oo ka qeyb qaadanayay Barnaamijka Nasashada SBC ee Jimce kasta ka baxa Idaacada SBC ayaa muujiyay ragadtiyo isku soo dhow oo ay ka qabaan shirka iyagoo qaarkood ku tilmaamay wax dan u ah Soomaaliya qodobadii ka soo baxaxay qaarna aysan wax dan ah ugu jirin umada Soomaaliyeed.
Waxa ay qaarkood soo dhaweeyeen go’aamada laga qaatay la dagaalanka Burcad badeeda iyo dhinacyada kale ee Amaanka dalka, iyo weliba kii lagu soo bandhigay soo dhaweynta wadahadal dhexmara masuuliyiinta Soomaalida iyo Maamulka la baxay Soomaaliland, waxaana ay ku tilmaameen in ay ka filayaan dhaqan gelinta dhamaan waxyaabaha soo baxay .
Sidoo kale waxay ku tilmaameen dadka qaar in qodobada ka soo baxay shirkani uu noqday mid aanay masuuliyiintii Soomaaliyeed ee ka qeyb galay shirka waxba ka geysan oo ay ahaayeen kuwo ay la yimaadeen dowladihii isugu yimid ayna tahay wax ay dan iyaga oo qura ugu jirto.
Balse badi dadkii ka soo qeyb galay Barnaamijka waxay ahaayeen kuwo soo dhaweynayay kulanka iyagoona sheegay in kulankani uu ahaa mid umada Soomaaliyeed dan u ah waxyaabo badanna ka bedelan shirarkii hore ee loo qaban jiray Soomaalida maadaama kulankani ay isugu yimaadeen wadamo kor u dhaafaya 40 oo ka mid ah wadamada waaweyn ee Caalamka.
Sikastaba ha ahaatee shalay ayay aheyd markii uu Magaalada London ka dhacay kulan soconayay saacado oo la isugu keenay Masuuliyiinta Soomaalida iyo wadamo ku yaala Qaaradaha Africa Yurub iyo Ameerica, madaxda qaramada Midoobayna ay goob joog ka ahaayeen.
Wadamada isugu yimi Shirka London ee arinta somalia looga hadlayo Waxay mujiyeen tageero in ay u hayaan Somalida waxa kaloo ku cad ajandaha shirka Talada Somaliyeed in loo Daayo Dadka Somaliyeed.
Hadii Farsamo Xumada Mudada soo Taxaneyd ee ah in guruub gooni Wax Khaasa u watah Asbaabti ay doonto salka haku haysee inta kale ku muquniyaan waxay ilatahay Rajo Dhab ah sadashedi lagagama tashan karoh.
waa ariin lagu farxo waayo waxaa ka soo qayb galay Wadamada 55 wadan oo danaynayo ariimaha soomaaliya.
Waxay mujiyeen tageero in ay u hayaan Somalida waxa kaloo ku cad ajandaha shirka Talada Somaliyeed in loo Daayo Dadka Somaliyeed.
waayo waxaa iimaanaya in ay heshiyaan
KUDARSADA OO IN WALIBA SOLILAND NA RUNTA LOOSHEEGAY OO AY RIYADII IYO MAAWEELADII SOO AFJARANTAY
shirkii kadhacay magalada london ee wadanka britain aniga waxan u arkaa shir aan wax ba ka so baxayn sababtoo ah waxaan aamin sanahay wadamada ka so qabngalay in ay danoohota watan oo aysan wadin dadka somaliyeed danohoda sidokale anagaa hadan dad somaliya nahay waaxa naloka bahan yahay in aan isku tagno oo kahadalo danaheena inaga oo aan wax ajnebiyii nagu dhexjirin
War sawirkaasi ma ciise ku caroobaa alla yaa intuu xanaaqay labo jeer ku wareegay meeshaas sawiran kkkkk(ciise ku caroo)
Walal shacabka Puntland hadii aan nahay waxaan nahay dad mar walba taageero iyo wadniyada somaliya aan ka xiisa dhicin.
Saxaafada Puntland waxan ka codsan lahaa in websetka DAYNIILE ay dambi ku soo oogaan waa wargayska ka shaqeeya xumaanta Somalia oo dhan. Maanta waxa uu soo qoray wax laga yac yaqsado. walal u gudbiya ururka saxaafada Somalia in ay somalia u baahnayn in xiligan laga shaqeeyo xumaanta.
Abdikadir Abdinur Isse says:
Runtii waxaan u arkaa Guul u soo hoyatay dhamaan umada soomaaliyeed meesha waxaa isagu yimid ku dhawaad 50 Dawladood oo ah kuwa caalamka miisaanka weyn ku leh..
Marka waxaan u arkaa hada in beesha caalamku ay soomaliya rajo weyn ay ka qabto oo aysan, sii fiirsan doonin dhibta ka jirta soomaaliya, oo ay ugu horeeyaan burcad badeeda iyo argagaixsada shabaabka….. soomaaliya marka hada rajo ayaa ka soo socota ee ilaahay khaatumada khayr ha nooga dhigo, waana u mahadcelinayaa dhamaan madaxda soomaaliyeed ee shirkaas ka qaybgalay muujiyeyna dareenkooda.
waa guul umada somalia uu sohoyaday wayo shirga waxa loshekay somali waa miit haldowlad somalia wen ras caser iyo ras camboni waa miid………….henari kilinton waxay tiiri america waa intas is teed waana hal dowlad , somalia adinga wada haad laaaaaaaaaaaaaa xaqidi waa in taas bes guuuuuuuuuuuuuu,, mamul gobaledka , XIN IYO XEEB ,,,,,,,,,,,, KKKKKKKKKKKKKK CADADO FIIFA
GUUL ,, XIIBIN IYO XEEB ,,, MAMUL GOBALEDKA GUUL SOMALI QAAS AHAN SHACABGA REER I…………………. XIBIN IYO XEEB …….. CADADO FIIFA